XOG: Man United, Arsenal & Tottenham Oo Dhibane U Noqonaya Garoomada Madhan Iyo Kooxaha Ay Faa'iidada Wayni Ugu Jirto Garoomada Dhex Dhexaadka Ah - Gool24.Net
XOG: Man United, Arsenal & Tottenham Oo Dhibane U Noqonaya Garoomada Madhan Iyo Kooxaha Ay Faa’iidada Wayni Ugu Jirto Garoomada Dhex Dhexaadka Ah
May 6, 2020 Mahamoud Batalaale
Horyaalka Premier league ayaa dib u bilaami doona xiliyada soo socda laakiin waxa kulamada lagu ciyaari doonaa garooma albaabadu u xidhan yihiin oo bilaa taageeroyaal ah si halista coronavirus loo yareeyo.
Laakiin waxaa la ogaaday kooxaha ay dhibaatada ugu badani ka soo gaadhay doonto taageero la’aanta iyada oo qiimayntan lagu saleeyay kulamadii ay kooxuhu garoomadooda iyo taageerayaasha awgood ay dhibco ku soo heleen xili ciyaareedkan.
Kooxda Norwich City ayaa noqon doonta kooxda ay dhibaatada ugu badani ka soo gaadhi doonto taageero la’aanta maadaama oo ay boqolkiiba 73% dhibcihii ay xili ciyaareedkan soo urursadeen ay ku yimaadeen saamaynta taageerayaashooda ee kulamadii ay minankooda joogeen.
Boqolkiiba 27% kaliya ayay Norwich dhibco ku soo heshay garoomada banaanka ka ah garoonkeeda waana kooxda ay saamaynta ugu xumi ugu dhici doonto marka xili ciyaareedka lagu bilaabo taageero la’aan ama xataa garoomo dhex dhexaad ah oo madhan.
Laakiin kooxda Southampton ayaa si layaableh u noqotay kooxda taageerayaasha iyo garoonkeeda dhibcaha ugu yar xili ciyaareedkan ku soo heshay waxayna Saints garoonka ay taageerayaasheedu ka buuxeen ku heshay boqolkiiba 39% dhibcood oo kaliya halka boqolkiiba 61% ay ku heleen garoomadii ay martida ku ahaayeen ee ay taageerayaasha yar ku lahaayeen.
Kooxda koobka Premier league labada gacmood ku sii haysata ee Liverpool ayaa boqolkiiba 53% waxay dhibcihii xili ciyaareedkan ku soo qaadatay garoonkeeda Anfield halka boqolkiiba 47% ka kale ay ku soo heshay garoomadii ay martida ku soo ahayd.
Manchester United waxay boqolkiiba 63% dhibcaha ay haysato ku soo heshay Old Trafford iyo taageerayaasha kooxdeeda horteeda waxayna ka mid tahay kooxaha u dhibtoon doona taageerayaasha iyo Old Trafford haddii garoomo dhex dhexaad ah oo madhan lagu ciyaaro sida uu qorshuhu yahay.
Man United waxay garoomada banaanka ku soo heshay boqolkiiba 37% dhibcood taas oo fursada kaalmaha sare ee Man United halis galin karta haddii ay waayaan wajigii fiicnaa ee ay dhibcaha fiican ku soo heleen.
Chelsea waa kooxda labaad ee loo arko in ayna dhibaato badan u mari doonin haddii garoomo madhan ama dhex dhexaad ah lagu ciyaaro maadaama oo ay xili ciyaareedkan ku soo dhibtoonaysay garoonkeeda Stamford Bridge iyo jamaahiirteeda horteeda.
Chelsea waxay xili ciyaareedkan garoonkeeda ku soo heshay boqolkiiba 48% dhibcaha ay haysto halka boolkiiba 52% ay ku soo shaqaysatay dhibcaha ugu badan garoomadii martida, waana sababta ay Blues farxad ugu noqon karto haddii xogtan la raaco.
Man City waxay dhibcaha ay haysato boqolkiiba 54% ku heshay Etihad Stadium halka boqolkiiba 46 ay ku soo shaqaysatay garoomada banaanka ee ay taageerayaasheedu ku yareeyeen.
Arsenal waxay ka mid tahay kooxaha ay dhibaatada ku noqon doonto in lagu ciyaaro garoomo dhex dhexaad ah oo madhan maadaama oo ay boqolkiiba 63% dhibcaha ay haystaan ku soo shaqaysteen taageerayaashooda hortooda ee Emirates Stadium halka boqolkiiba 38% ay ku soo heleen dhibcaha garoomadii banaanka garoonkooda.
Saamaynta ay xogtani tilmaamayso ayaa keeni karta in tartankii kaalmaha sare ee Champions League iyo Europa League ay saamayn toos ah ku yeelan karto.
Haddaba halkan kaga bogo Xogta boqolkiiba koox kasta oo Premier League ahi dhibcihii ay garoonkeeda xili ciyaareedkan ku soo heshay iyo boqolkiiba dhibcihii ay martida ku heleen.
FIIRO GAAR AH: Tirada midabka cagaarka ah waa boqolkiiba dhibcaha ay kooxuhu ku soo shaqaysteen garoonkooda halka midabka kale uu yahay boqolkiiba dhibcihii ay martida ku soo shaqaysteen kooxuhu.
Haddii xogtan la qiimeeyo kooxaha Arsenal, Tottenham iyo Manchester United ee kaalmaha sare u tartamayay ayay saamayn xun ku yeelan kartaa halka kooxaha Chelsea, Wolves, Leicester City, Liverpool, Man City iyo Sheffiled United ayna saamayn badan oo xun ku yeelan doonin.